३२.६७ अंकले घट्याे शेयर बजार, ८ अर्ब बढीकाे काराेबार « Dainiki
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार १५:३८
३२.६७ अंकले घट्याे शेयर बजार, ८ अर्ब बढीकाे काराेबार
१० फागुन, काठमाडाैँ । साताको दोस्रो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ३२.६७ अंकले घटेको छ । यसदिन परिसूचक १.२४ प्रतिशतले घट्दा बजार २६०७.६७ विन्दुमा झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, यस दिन २०७ कम्पनीहरूको २ करोड १६ लाख १४ हजार ४५२ कित्ता शेयर ८ अर्ब ४० करोड ६३ लाख १० हजार ६७१ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
यसदिन लगानीकर्ताहरू हाइड्रोपावरतर्फ आकर्षित भएका छन् । अन्य सबै उपसमूहहरूको सूचक घट्दा हाइड्रोपावर र अन्य समूहमा मात्र लगानीकर्ताको आकर्षण छ । यी दुई कम्पनीहरूमा क्रमशः हाइड्रोपावर २.२६ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य समूहतर्फ १.२९ प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै यस दिन पनि नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस बैंकको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दै ६ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै आँखुखोला जलििवद्युत कम्पनीको शेयरमूल्यमा पनि सर्किट लागेको छ । यसको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दै १ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै अन्य ६ वटा कम्पनीहरूको शेयर मूल्य पनि सर्किट लेभलमा पुगेको छ । जसमा नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको शेयर मूल्य ९.९३ प्रतिशत बढेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयरमूल्य ९.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य ९.६७ प्रतिशतले बढेको छ । शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य ९.६३ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै सनराइज फ्रस्ट मुचुअल फन्डको शेयर मूल्य ९.५९ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १५:३८
भर्ने हाेइन त ? ज्योति लाईफको आईपीओ आजदेखि खुल्यो, कति दिने आवेदन ?
२१ फागुन, काठमाडाैँ । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सकाे आईपीओ शुक्रबारबाट निश्कासन हुँदै, कति दिने आवेदन ?
१८ फागुन, काठमाडाैँ । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले शुक्रबारदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निश्कासन तथा
ज्योति लाइफको आइपिओ निष्कासन मिति सर्यो, कहिलेबाट आवेदन दिन सकिन्छ ?
१८ फागुन, काठमाडाैँ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन २३ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री
आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट, बाँडफाँटको नतिजा यसरी हेर्न सकिन्छ
१५ फागुन, काठमाडाैँ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्र बाँडफाँटको नतिजा हेर्नका